War Deg deg: Xaalada Laascaanood oo Kacsan iyo Ciidanka Somaliland oo Dad Shacab ah ku dhaawacay (Warbixin) | KALSHAALE
War Deg deg: Xaalada Laascaanood oo Kacsan iyo Ciidanka Somaliland oo Dad Shacab ah ku dhaawacay (Warbixin)
Laascaanod ( Kalshaale ) Laba dumar oo lagu kala magacaabo Sacdiya Xirsi Cunaaye iyo Shugri Cabdilaahi Ducaale ayaa dhaawac soo gaadhay kadib markii qaar kamid ah ciidamada milatariga somaliland ay rasaas ku fureen shacab ku ganacsanayay badhtamaha magaalada laascaanood.
“Laba baabuur ayaa suuqa soo istaagey waxay adeeg u raadinayeen ciidamada Somaliland kadib wiil baabuur wata ayaa soo ag istaagey naga dhaqaaq ayay dhaheen wiilkii wuu diidey kadibna inay gacan saaraan bay damceen shacabkii suuqa ku ganacsanayey ayaa shiid iyo gacan qaad ku bilaabay, kadib rasaas ayay fureen laba dumar ah ayay ku dhacday”, ayuu yiri goob-jooge Warbaahinta la hadlay.
Arintan ayaa kusoo beegmaysa iyadoo Xiisado Colaadeed ay ka taagan yihiin Gobolka Sool, Taasi oo ka dhaxaysa Ciidamada Puntland iyo Somaliland, iyadoona Magaaladu haatan tahay Bandow aan cidi ku soo rogin, iyadoo lagu jiro maalintii u danbeysey u diyaargarowga maalinta ciidul Fidriga.
Ma naago iyo ciyaal baa qoryihii ka daadsaday!!!!
Hello Xaarmaajo Hello Gaas Ciidkii aad ku tukaynayseen laascaanod waa caawaaa ..shacabkii wuu idin sugayaayee soo gaadhaa tolaayeey waataas shacabkii xabad nool nool lala dhacaayo…tolaayeey yaa daaroodaay, waar nagasoo gaadhaay IDOORKA.
ALA MAXAA RAG BADAN KALSHAALE.COM dhuumasho kusoo gali doonaa iyo magac bedelasho.
Shacabka halla dhowro.
Daaroodku kuwii ka yaacay dhawlad dhan oo ay maamulaan saw maaha?
Diyaaradihii ayay ka yaaceen,noloshii dawlad nidama ayay qaxooti ka doorteen.
Hello flight 13.
Waxay rabaan inay mar kale qaxaan oo maraykan loo qaado.
Flight 14 ayay rabaan
Laaska waa laxorayn goray noqogto
Adigu gormaad borama kadulqaadi
Jabhada xooga ku haysata kahadal
Gudabiirsay iyo gumaysigay ku jiraan
Laascaanood waxay ku taagan tahay dhabaday
Horgale dayuus isaga xorayn lahayd
Boorama cidna uma maqna ceelna umaqodna
Masaakiin itaanad cid kale kahadal ta shacabkaga
Haysata kahadal Rabadaan Kariim
iidoor idinkaa xashin iyo dulcad laydin geynayaa